အန်းဒရွိုက် - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
ပင်မစာမျက်နှာ » Tag Archives: အန်းဒရွိုက်
Tag Archives: အန်းဒရွိုက်
CHATSWORTH,, CA, ဇူလိုငျ 18, 2019 - KRK စနစ်များ, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏ Gibson မိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, iOS နဲ့ Android အတွက် App ကို၎င်း၏တော်လှန်ရေး KRK အသံ Tools များမိတ်ဆက်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စတူဒီယို tools များ၏ဤအခမဲ့ suite ကိုမဆိုမော်နီတာ setup ကိုအတူအလုပ်လုပ်သောငါးအသုံးဝင်သောနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ-based အစိတ်အပိုင်းများလည်းပါဝင်သည်, နှင့်သစ်ကို KRK ROKIT G4 မှစောင့်ကြည့် acclimate ကူညီပေးသည်တစ်ခုအစွမ်းထက် tool ကို (EQ ထောက်ခံချက်) ...
အန်းဒရွိုက် set-top box ပေါ် OTT Delivery ရိုးရှင်းဖို့ RedSo အတူ Viaccess-Orcas အပေါင်းအဖေါ်များ
ပဲရစ် - အောက်တိုဘာ 4, 2018 - Viaccess-Orcas (VO), OTT နှင့်တီဗီပလက်ဖောင်း, content တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အဆင့်မြင့်ဒေတာဖြေရှင်းချက်ပေးမယ့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ပေါ်တွင်ပြုလုပ် RedSo တစ်ဦးဦးဆောင်အာရှမိုဘိုင်း app ဖှံ့ဖွိုးတိုးကုမ္ပဏီနှင့်အတူပူးပေါင်းမူကြောင်းကိုယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် လစာ-TV ကိုအော်ပရေတာများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးများအတွက်အဆုံးမှအဆုံးသို့ OTT ဖြေရှင်းချက်။ RedSo ရဲ့ Android-based user interface ကို (UI ကို) နှင့် VO ရဲ့တီဗီပလက်ဖောင်းအကြားပေါင်းစည်းမှုကိုထောက်ပံ့ပေး ...
Edgeware 2018 NAB Show မှာသစ်ကိုကြော်ငြာသွင်းခြင်းနှင့် CDN ရွေးချယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတင်ပြ
တီဗီ CDN ပံ့ပိုးပေးသည့် 10201 NAB Show မှာတဲ SU2018CM မှစ. ဒီဂျစ်တယ်မူပိုင်ခွင့်ကိုလျော့ချဖို့ဘယ်လိုပေါ်လည်းပစ္စုပ္ပန်မူရင်းသုတေသနပြုကြလိမ့်မည်ကို Edgeware သူ့ရဲ့အွန်လိုင်းတီဗီပေးပို့ပလက်ဖောင်းထည့်သွင်းလိုက်သည်အသစ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို၏နံပါတ်ဖွယ်ရှိကြောင်းသိရသည်။ တီဗီ CDN နည်းပညာ၏ရှေ့ဆောင်ကိုလည်းလိမ့်မည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သုတေသနရလဒ်များနှင့်အတူပစ္စုပ္ပန်ဖောက်သည်အသုံးပြုမှုကိုအမှုပေါင်း ...
ဗီဒီယိုပစ္စည်း YouTube ကိုကြယ်လိုအပ်နေသောူပည်သူ၏5ပိုငျးပိုငျး
သင်ပထမဆုံး YouTube ဗီဒီယိုတိရစ္ဆာန်ရုံမှသူ၏ခရီးစဉ်မှတ်တမ်း, YouTube ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူ Jawed Karim ကများဖြင့်တင်ထားသောခဲ့ကွောငျးကိုသိသလား? '' ပုတိရစ္ဆာန်ရုံမှာငါ့ကို '' သည်သူ၏ဗီဒီယို, သာ 18 စက္ကန့်ကြာမြင့်စွာဖြစ်ခဲ့သည်။ အစာရှောင်ခြင်းရှေ့ဆက်ယခုပစ္စုပ္ပန်တစ်နေ့တာရန်နှင့်သင့်အကောင့်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုပါတယ်တစ်ချိန်က 15 မိနစ်သို့မဟုတ်ပိုရှည်သောဗီဒီယိုများရှိသည်။ ကျနော်တို့ကတည်းကရှည်လျားသောလမ်းလာပါတယ် ...
Aries, ကင်မရာမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ, မိတ်ဆက် Premiere ကုန်ပစ္စည်းသည် Blackbird နဲ့ X10 ၏တစ်ဦးက New အမှတ်တံဆိပ်
သီးသန့် Adorama, ultra-high resolution ထဲမှာ 10p HD ဗီဒီယိုနှင့် 1080MP နေဆဲပုံရိပ်တွေကိုရိုက်သည့် On-board ကိုကင်မရာတပ်ဆင်ထား quadcopter အသစ်စက်စက် Aries Blackbird နဲ့ X16 မှာရရှိနိုင်; အထိ 1,500 ခွနေဝေဟင်ကဗီဒီယိုရိုက်ကူးသင့်ရဲ့ရူပါရုံကိုအတောင်ပံပေးသည်! နယူးယောက်, နယူးယော့ - ဒီဇင်ဘာလ 8, 2014 - Adorama, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယို, ပုံရိပ်နှင့်အီလက်ထရွန်းနစ်လက်လီအရောင်းဆိုင်များ၏တဦးတည်း, ယနေ့ ...